Weerar Askar Lagu Dilay Oo Markale Ka Dhacay Sh/dhexe. – Bogga Calamada.com
Weerar Askar Lagu Dilay Oo Markale Ka Dhacay Sh/dhexe.
June 29, 2017 11:54 am Views: 47
Dagaallo ayaa dib uga qarxay deegaanno katirsan Gobolka Shabeelaha dhexe kadib markii ciidamo Mareykan ah oo ay wehliyaan maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah ay duullaan ku qaadeen deegaano hoos yimaad degmada Mahadaay.
Maanta barqadii ayay dagaallo culus ku dhaxmareen ciidamada Al Shabaab iyo Huwanta dhulka howdka ah ee Kala Bara Cali-Fooldheere iyo Mahadaay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan Hal askari laga dilay maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee Mareykanku tababaray tira kalane laga dhaawacay.
Ciidamada Al Shabaab ayaa weerar dhabagal ah kala hortagay ciidamada huwanta ah, qof ku sugan Mahadaay ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Huwanta ah oo dhimasho iyo dhaawac wata ay dib ugu laabteen Tuulada Cali-Fooldheere.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ah ay Meydadka Askari uga carareen goobta dagaalka dhaawaca ciidanka cadowga gaaray ayaa lagu sheegay todobo askari , shalay gelinkii dambe ayay deegaanka gaareen saraakiil Mareykan ah oo wata 4 gaari oo nuuca qafilan ah iyo Boqolaal ciidamo Afrikaan ah oo dusha sare ay ka waardiyaynayaan diyaarado dagaalka balse maanta ayay la kulmeen iska caabin adag.
Waxaa beenoobay warar ay saraakiil katirsan DF-ka ka baahiyeen idaacadaha Muqdisho oo ahaa “Ciidamadeena kaligood ayaa qabsaday Cali Fooldhere”, ciidamada huwanta ah ee dagaalka uga Jira Cali-Fooldheere ayaa ka kooban sedax qeyb oo kala ah Burundi,Mareykan iyo Maleeshiyaadka Bangaraafta ee Ballidoogle ay ku tababareen saraakiisha American-ka ah.